Man United Mise Man City: Kooxda Uu Tababare Arsene Wenger Doonayo In Uu Ka iibiyo Alexis Sanchez Oo La Ogaaday+ Sababta – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Man United Mise Man City: Kooxda Uu Tababare Arsene Wenger Doonayo In Uu Ka iibiyo Alexis Sanchez Oo La Ogaaday+ Sababta
Man United Mise Man City: Kooxda Uu Tababare Arsene Wenger Doonayo In Uu Ka iibiyo Alexis Sanchez Oo La Ogaaday+ Sababta
Tababaraha Kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa la ogaaday kooxda uu doonayo in uu ka iibiyo xiddigiisa baxsadka ah ee Alexis Sanchez inta lagu guda jiros uuqa January.
Alexis Sanchez ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxaha isku magaalada ah ee Man United Man city kuwaas oo doonaya xiddiga heshiiskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan inta lagu jiro suuqa January.
Wargayska Daily Mail ayaa sheegaya in uu Wenger doonayo in uu Sanchez ka iibiyo kooxda Man city kana hor istaago in uu u dhaqaaqo kooxda Man United.
Isla wargayska ayaa intaa ku daraya in aanu Wenger hor istaagayn in uu xiddigu ka tago kooxda inta lagu jiro bishan si uu lacag fiican uga helo halkii uu xor ku waayi lahaa dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Laakiin Wenger ayaa doonaya in uu xiddigan ku biiro kooxda Man city una diido Man United iyada oo ay sabab u tahay xiriirka xun ee kala dhexeeya Tababaraha Man United ee Jose mourinho.
Wenger ayaa aaminsan in ku biirista Sanchez ee United uu ka caawin doono in ay ku dhamaysato kaalin ka saraysa Arsenal maadama ay haatan labadooduba u tartamayaan kaalmaha loogu soo boxo chamapions league.